Muxuu Xasan Sheekh ka yiri weerarkii Gaarisa? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Xasan Sheekh ka yiri weerarkii Gaarisa?
Muxuu Xasan Sheekh ka yiri weerarkii Gaarisa?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa uga tacsiyeeyay Madaxweynaha Jamhuriyadda Kenya Mudane Uhuru Kenyatta iyo shacabkiisa, weerarkii argagixiso ee shalay lagu laayey ardey iyo ad kale oo aan waxba galabsan, jaamacad ku taalla magaalada Gaarisa ee Waqooyi Bari Kenya.
“Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaan tacsi u diraya , murugadana la qeybsanayaa qoysaska iyo eheladdii dadkii sida arxandarrada ay u laayeen argagixisada shar- wadeyaasha ah. Waxan dadka dhaawacmey u rajeynayaa caafimaad buuxa oo degdeg ah’’, ayuu yiri Madaxweynaha.